मञ्जुश्रीको नाफा ४९ प्रतिशत बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी १० रुपैयाँ Bizshala -
मञ्जुश्रीको नाफा ४९ प्रतिशत बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी १० रुपैयाँ
काठमाडाैँ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको नाफामा सुधार आएको छ । कम्पनीले आज सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक विवरण अनुसार गत वर्षको भन्दा ४९ प्रतिशतले नाफा बढेको देखिएको हो ।
फाइनान्सले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा ५ करोड ४६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खुद आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा गरेको खुद नाफा ३ करोड ६५ लाख ७८ हजारभन्दा याे ४९ प्रतिशतले बढी हो ।
कम्पनीले ब्याज आम्दानीमा गरेको वृद्धिका कारण नाफामा पनि सुधार आएको देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ४ करोड ८७ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैया ब्याज आम्दानी गरेको थियो । यो गत वर्षको सोही अवधिका तुलनामा करीव ७० प्रतिशतले बढी हो । यसबाट कम्पनी सुधार उन्मुख रहको संकेत देखिएको छ ।
कम्पनीको जगेडा कोष पनि सबल बनाउँदै लगेको देखिएको छ । तस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको जगेडा कोषमा १५ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । गत वर्ष कम्पनीमा ६४ लाख ७५ हजार रकम मात्र जगेडा कोषमा रहेको थियो । कम्पनीको चुक्ता पूजी ७२ करोड ४३ लाख पुगेको छ ।
यसैगरी कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिकीकरण गरिएको) १० रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ । मूल्य आम्दानी अनुपात १२ दशमलव ८२ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय २१ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ ।
कम्पनीले खराब कर्जा अनुपातमा समेत केही सुधार गरेको छ । कूल कर्जाको करीव २ दशमलव १३ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । गत वर्ष २ दशमलव ७१ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको थियो ।
Manju shree finance
एनआईसी एशिया लघुवित्तद्वारा ब्याजमा थप १०% छुट, हर्जाना ब्याज
काठमाण्डौ। एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नै...
साना किसान लुघवित्तको नाफा २५.७५% ले बढ्यो, ईपीएस रु. ५८
स्वाबलम्बन लघुवित्तको खुद नाफा रु. ३०.२७ करोड, ईपीएस रु. ५०.९५
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा स्वाबलम्बन...
लक्ष्मी लघुवित्तद्वारा अधिकांश सूचकमा प्रगति, नाफा २४.९५%ले
काठमाण्डौ । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक...
सिभिल लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा १.३७%ले बढ्यो, नाफा ९.२% ले
काठमाण्डौ । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड चालु आर्थिक...
स्पर्स लघुवित्तद्वारा अधिकांश वित्तीय सूचकमा छलाङ, खुद
काठमाण्डौ । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको...
यस्तो आयो फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको तेस्रो त्रैमास वित्तीय
काठमाण्डौ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको...
ग्रामीण विकास लघुवित्तबाट कोरोना कोषमा रु.२८ लाख ५० हजार
काठमाण्डौ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटडले नेपाल...